Iingcebiso ezili-10 zeQhinga lokuQinisa ngokuGcina | Martech Zone
Abantu bayandithanda. Banike umyalezo omnandi wentengiso ngesaphulelo kwaye baya kuhamba… kodwa banike ithuba lokuphumelela ibheji kwiphepha labo kwaye bayakulwela. Ndiyazihlekisa njengoko ndizifumana ndikhathazekile emva ukulahlekelwa Ubusodolophu kumacala amane anesine - kuyahlekisa. Yiloo nto kanye gamification ixhomekeke ku.
Kutheni iGamification isebenza?
I-Gamification isebenza ukwanelisa eminye yeminqweno yabantu esisiseko: ukwamkelwa kunye nomvuzo, inqanaba, impumelelo, ukhuphiswano kunye nentsebenziswano, ukuzichaza kunye nokuzincama. Abantu bazilambele ezi zinto kokubini kubomi babo bemihla ngemihla nakwi-intanethi. Iimpompo ze-Gamification ngokuthe ngqo koku.
Ibhola ekhatywayo ngomnye wabadlali abangaphandle kwintengiso abanceda abathengisi ukuba basebenzise amaqhinga okudlala kunye neendawo zabo kunye nokusetyenziswa. Baye basasaza iphepha elimhlophe, Ukuphumelela ngokuQinisekiswa: Iingcebiso ezivela kwiNcwadi yokuDlala yeNgcali. Kufundwe kakuhle. Nazi ezinye izinto eziphambili ekuphuhliseni isicwangciso sakho sokudlala:
Ukuchonga uLuntu- Ulungiso olwenziwe rhoqo lufuna ukuxhasa uLuntu. Iminqweno esisiseko yomntu iyomelezwa xa abanye benikela ubungqina ngayo. Kukwabalulekile ukuba nabanye abantu abanokukhuphisana nabo kwaye bathelekise impumelelo.
Imephu yeenjongo zakho -Xa usenza isisombululo sakho sokudlala, qiniseka ukuba uyila into elingana phakathi phakathi kwamava omsebenzisi kunye neenjongo zakho zeshishini.
Izinto eziphambili mazibekwe phambili Ufuna ukuba abasebenzisi bakho bathathe- Eyona ndlela yokujongana noku kukuma kwinqanaba le-astandard. Nje ukuba uchonge iZenzo zenkqubo yakho, uya kufuna ukuzibeka ngokulandelelana ngokwexabiso. Qala ngeyona ntshukumo inexabiso elincinci kwaye uyinike into '1.' Ukusebenza apho, nikezela amaxabiso ahambelana nayo yonke enye into.
Phuhlisa inkqubo yenqanaba -Amanqaku ayindlela elungileyo yokuvuza umsebenzisi ngokwenza into enexabiso kuwe (okt, ukuthenga, ukukhuphela, ukwabelana). Ewe amanqaku anokuba yindlela yokuba abasebenzisi bavuzane. Ekugqibeleni, kufuneka basebenze njengendlela yokunika abasebenzisi uhlobo oluthile lokusebenzisa amandla.
Sebenzisa amanqanaba - Zama ukukhetha iilebhile ezahlulahlulahlula kwinqanaba ngalinye. Ngelixa ukusebenzisa amanani lelona gama lilula, elinobuqili, elinomdla elinamathele kumxholo wenkqubo yakho linokusebenza kakhulu.
Yenza iibheji ezinomdla kunye neembasa - Xa uyila ibheji okanye indebe, qiniseka ukuba iyathandeka kwaye iyatsala. Ibheji kufuneka ikwahambelana nabaphulaphuli kunye nomxholo
Yongeza imivuzo -Umvuzo unokuba yiyo nantoni na ekhuthaza abasebenzisi bakho: Amanqaku, iibheji, iiTrophies, izinto ezibonakalayo, umxholo ongavulekiyo, iiMpahla zeDijithali, iiMpahla zoMzimba, iiKhuphoni, njl.
Sebenzisa ingxelo yexesha lokwenyani -Ingxelo yexesha-lokwenyani yindlela elungileyo yokuqonda kwangoko kunye nokuphendula kubasebenzisi bakho.
Sebenzisa izinto ezilungileyo -Impahla ebonakalayo ilungile kwindawo "yokutsha" -into yabasebenzisi yokubeka amanqaku abo.
Iselfowuni, iNtlalontle, kunye neGeo Imfono, Imidiya yokuncokola, kunye nokujoliswa kweJografi kulongezo olukhulu kwinkqubo yakho xa unokubopha onke amaqonga, yabiwe, kwaye ujolise kuyo ngendawo.
I-Bunchball ngumboneleli ophambili wokwenza amashishini amashishini, asetyenziselwa ukuqhuba ukuthatha inxaxheba kwexabiso eliphezulu, ukuzibandakanya, ukuthembeka kunye nengeniso. Iqonga lomdlalo weBunchball yeyona nkonzo inokwenzakala kwaye inokuthenjwa esekwe kwilifu kwiiwebhusayithi zokudlala, ekuhlaleni nakwizicelo zeselfowuni. I-Bunchball ilandelele ngaphezulu kwe-20 yezigidigidi zezenzo ezikhokelela ekunyanisekeni kwabathengi kunye nokuzibandakanya kwabasebenzi kubaxhasi babo.
Khuphela u-Winning nge-Gamification: Iingcebiso kwi-Playbook yeNgcali
tags: ibhola yebholaukuthengiswa kwabathengiulwandiso lwabasebenzigamificationusetyenziso lomdlaloamanqanaba okuphuculaamanqaku okuphuculaimbuyekezo yomdlaloIingcebiso zomdlalo
Juni 24, 2011 ngo-3: 51 AM
Kwabo banomdla, iLithium ibeka iGamification webinar- http://mkt.gs/mg8EQk NgoLwesithathu, nge-29 kaJuni 2011 @ 11:00 AM PDT / 2:00 PM EDT